Iindaba-Uhlalutyo lwemeko yengeniso yeshishini lezixhobo lase China kwikota yokuqala
Uhlalutyo lwemeko yengeniso yeshishini lezixhobo lase China kwikota yokuqala
Ngokwedatha ekhutshwe yi-National Bureau of Statistics, eyona ngeniso yamashishini eshishini ngaphezulu kobungakanani obuchongiweyo kwizixhobo zaseChina nakwimveliso yokuvelisa imitha kwikota yokuqala yayiyi-167.95 billion yuan, ukonyuka kwe-11.6 ngonyaka-ngonyaka. % Imali iyonke yayiyi-11.01 yezigidigidi ze-yuan, inyuke nge-10.5% ngonyaka-ngonyaka; Eyona nzuzo iphambili yomsebenzi yayiyi-10.4 yezigidigidi ze-yuan, inyuke nge-13.8% ngonyaka-ngonyaka. Phakathi kwamacandelwana angama-36, isalathiso sokukhula kwengeniso yokusebenza kunye neenzuzo zizonke zeshishini kunye nemveliso yokuvelisa imitha liqaqambile, liphezulu kunokukhula kweshishini lesizwe.
Ukongeza, kufanelekile ukuba uqaphele ukuba imveliso yegesi kunye nomzi mveliso wokubonelela uxhamle kwixabiso legesi kunye nokuhlengahlengiswa kobushushu, kunye nengeniso yokusebenza inyuke ngama-23.7% unyaka nonyaka. Icandelo lokukhula. Iziganeko zongcoliseko lwamanzi ezithe zenzeka rhoqo kwikota yokuqala zenze imveliso yokuhambisa amanzi kunye nokubonelela ngokuphuhla kwinqanaba elitsha, kwaye inzuzo iyonke inyuke ngama-305.3% unyaka nonyaka.
Ukonyuka kwesibini ngobukhulu kwinzuzo iyonke bekukho kumbane, imveliso yobushushu kunye nonikezelo, inyuke nge-32.3% unyaka nonyaka, izuza kuhlaziyo lwegridi kunye nohlengahlengiso lobushushu. Icandelo lezemigodi yamalahle kunye neleshishini linokukhula okuphezulu okungathandekiyo, okubonisa ukungahambi kakuhle kwenkqubo yemveliso.
NgoJanuwari-Matshi, iyonke inzuzo yamashishini eshishini ngaphezulu kobungakanani obuchongiweyo yafikelela kwi-1,294.24 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka konyaka-nge-10.1%, kwaye inqanaba lokukhula lalingu-0.7 ngaphezulu kunelo ngoJanuwari-Februwari. Ipesenti yomsebenzi ophambili yayiyi-1,223.85 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka konyaka-nge-9.4%, kwaye inqanaba lokukhula yayiyipesenti enye yenqaku elingaphezulu kunelo ngoJanuwari nangoFebruwari.
Ngo-Matshi, iyonke inzuzo yamashishini eshishini ngaphezulu kobungakanani obuchongiweyo ifikelele kwi-513.16 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka konyaka-nge-10,7%.
NgoJanuwari-Matshi, phakathi kwamashishini eshishini ngaphezulu kobukhulu obuchongiweyo, amashishini aphantsi korhulumente nalawo alawulwa ngurhulumente afumene inzuzo iyonke ye-354.84 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka konyaka-nge-2.9%; Amashishini adibeneyo Inzuzo iyonke ifikelele kwi-17.1 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda kwe-1.1%; ishishini elidibeneyo lesitokhwe lafumana inzuzo iyonke ye-755.05 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-9.1%; Amazwe angaphandle kunye neHong Kong, iMacao kunye namashishini otyalo-mali aseTaiwan afumene inzuzo iyonke ye-30.12 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda kwe-12.5%; Amashishini abucala afumene inzuzo iyonke ye-419.14 yezigidigidi ze-yuan. , ukwanda nge-14.2%.
Kwiinyanga ezintathu zokuqala, ishishini lezemigodi lifumene inzuzo iyonke ye-168.51 yezigidigidi ze-yuan, yehla nge-15.1% ngonyaka-ngonyaka; Icandelo lemveliso lafumana inzuzo iyonke ye-1021.47 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda nge-13.9%. Umbane, ubushushu, igesi kunye nokuveliswa kwamanzi kunye nokubonelela ngemveliso kufumene inzuzo iyonke ye-104.26 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwama-29.7%.
NgoJanuwari-Matshi, phakathi kwamacandelo amakhulu emizi-mveliso engama-41, inzuzo iyonke yemizi-mveliso engama-33 inyuke unyaka nonyaka, ishishini elinye lalicaba, kwaye amashishini asixhenxe ehlile. . Ukukhula kwenzuzo enkulu kumzi mveliso: inzuzo iyonke yezolimo kunye necandelo lokulungiswa kokutya kunyuswe nge-8.2% unyaka nonyaka, umzi mveliso wempahla eyolukiweyo unyuke nge-12.4%, ukwenziwa kwe-petroleum, i-coking kunye ne-nuclear fuel industry yonyuke nge-3.4%, imichiza ekrwada kunye nemichiza Ukuveliswa kweemveliso kunyuke nge-10%, iiminerali ezingezizo ezesinyithi Icandelo lemveliso likhule ngama-26.7%, imveliso yezixhobo ngokubanzi inyuke nge-16.3%, imveliso yezixhobo ezizodwa inyuke nge-11.7%, ishishini lokuvelisa iimoto lenyuke ngama-29.8%, umbane oomatshini nezixhobo zokwenza imveliso zonyuke nge-28.2%, kwaye ikhompyuter, unxibelelwano kunye nezinye izixhobo zokwenza izixhobo zombane zonyuke nge-21.5%. %, umbane, imveliso yobushushu kunye necandelo lokubonelela lonyuke nge-32.3%, imigodi yamalahle kunye ne-washing industry yehle nge-41.2%, i-oyile kunye ne-gesi yendalo yemigodi yehle nge-6.3%, ishishini lokunyibilikisa isinyithi kunye nomzi-mveliso wokuqengqeleka wehle nge-19.9%, engenantsimbi Ukunyibilikisa isinyithi kunye nokuqengqeleka kwecandelo lokucutha kwehle nge-13.6%.
NgoJanuwari-Matshi, amashishini amashishini ngaphezulu kobungakanani obuchongiweyo afumene ingeniso ye-235.539 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-8% ngonyaka-ngonyaka; Ezona ndleko ziphambili zeshishini yayiyi-20,497.38 yezigidigidi ze-yuan. , ukwanda nge-8.7%.
Ekupheleni kuka-Matshi, iiakhawunti ezifumanekayo zamashishini zorhwebo ngaphezulu kwesayizi ebekiweyo yayiyi-93,450.89 yezigidigidi ze-yuan, inyuke nge-13.1% ngonyaka-ngonyaka; Uluhlu lweemveliso ezigqityiweyo yayiyi-338.87 yezigidigidi ze-yuan, zenyuka nge-10.7% ngonyaka-ngonyaka. .
NgoJanuwari-Matshi, ireyithi yenzuzo yengeniso yeshishini eyintloko yamashishini eshishini ngaphezulu kwesayizi ebekiweyo yayiyi-5.4%, kwaye indleko nge-100 yuan yengeniso yeshishini eyintloko yayiyi-85.56. IYuan, eyona ngeniso yeshishini ifunyenwe kwi-yuan ye-asethi eyi-100 yayiyi-yuan eyi-115.1, kwaye iintsuku zengeniso yempahla egqityiweyo yayiziintsuku ezili-14.5.
Ixesha Post: Aug-13-2018